Allgedo.com » 2012 » August » 18
Home » Archive Daily August 18th, 2012 Ciid mubaarak dhamaan muslimiinta meel aad joogtaanba (halkaan ugu dir ciddii aad rabto Salaan iyo Hambalyo) Aug 18, 2012 Asalaamu Caleykum dhamaan umadda Soomaaliyeed meel aad joogtaanba, salaan kaddib, CIID MUBAARAK WALAALAHA MUSLIMIINTA AHOW MEEL AAD JOOGTAANBA. Rabbi hanaga wada dhigo kuwii uu u naxariisto, Soonka iyo salaaddana ka aqbalo.
Munaasabadda Ciidul Fitriga awgeed, maamulka Allgedo waxuu halkaan salaan iyo hambalyo ugu dirayaa guud ahaan Muslimiinta meel ay joogaanba, gaar ahaana umadda Soomaaliyeed ee... Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u diraya hambalyo ku aadan Ciidul Fidriga dhamaan Muslimiinta Caalamka Aug 18, 2012 Muqdisho, 18, Agust. 2012…..Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdi Weli Maxamed Cali ayaa caawa dhamaan muslimiinta Caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed Hawada u marinaya hambalyo ku aadan farxada Ciidul Fitriga.
Ra’isul wasaaruhu wuxuu Hambalyo u diryaa dhamaan Umadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, isagoona sheegay in Umadd kasta ay leedahay Ciid iyo munaasabado ay weeyneeyaan, hase... Mas’uuliyiin dhaqameed beesha Sade ka tirsan oo sheegay in ay beesha Sade ceeb ku tahay in ay cid kale u qeybiso xubnaha ay baarlamaana ka heleen Aug 18, 2012 Kaddib markii ay intii muddo ahba mas’uuliyiin ka tirsan dowladda KMG ah ee uu waqtigeeda sii dhacaayo iyo qurbajoog horor ah oo kasoo hayaamay dibadaha ay ku mashquulsanaayeen sidii ay dhaqanka beesha Sade haadaan uga tuuri lahaayeen, ayaa waxaa durbadiiba si weyn oo aan la qarin karin u muuqata guul darooyinkii ka dhashay hagar daamooyinkii ay kooxdaan Burcad-dhaqameedka ah u maleegeen... Beesha Yusuf Fiqi Cali (Reer Maxamed Carab) oo warsaxaafadeed kasoo saaartay cabasho ku saabsan sidii loo maamulay waxqaybsigii xubnaha baarlamaanka ee Beesha Tanade Daarood Aug 18, 2012 Kadib kulan ay yeesheen (Teleconference) nabaddoonada, waxgaradka , aqoonyahanada beesha Yuusuf Fiqi Cali eek u nool dalka iyo qurbahaba Waxay soo saareen qodobada hoos ku xusan:
2. Waxaa cadeyneynaa in Reer Maxamed carab oo seddex goor oo xubno baarlamaan la qaybsaday... Beesha Reer Xirsi oo Kulan ay Caabudwaaq ku Yeeshen raali galin uga bixiyay Aflagado loo geeystay Ugaaska Beesha Sade Bari Ugaas Axmed Bare iyo guud ahaan beesha Sade bari (Sawiro) Aug 18, 2012 Caabudwaaq, Somalia (AOL) – Kulan balaaran oo ay yeesheen besha reer Xirsi Diini ayaa waxaa ay raali galin ka bixiyeen aflagaado loo geeystay ugaas Axmed Barre Taakooy kaasoo ay beeshu aad uga xumaatay kuna sheegtay hadal gaf ah taasoo ay beshu sheegtay in ay u geeysatay Beesha Reer Dalal Diini.
Sidoo kale beesha reer Xirsi kulankoodaan Caabudwaaq ay ku yeesheen waxaa ay raali galin mida ugaaska... Soomaliya iyo siyaasiga maanta – By Abdullahi Isim Aug 18, 2012 Waa madal, waa arin mudan xusuusin iyo xisaabtan dhab ah. Waa mas’uuliyad iyo xil. Waa milgo iyo mansab ummadeed; Waa haybad iyo garasho hagaan dal iyo dad Allaah (Swt), ku manaystay diin islaan. Magaca Allaah(Swt) ugu dhaartay maaraynta iyo meelmarinteeda ummaduna u egmatay Ilaalinta sharafkeeda, ciskeeda, karaamadeeda, midnimadeeda iyo qaranimadeeda.
Waa maalin weyn, waxay xambaarsan tahay... Radio Allgedo/ Waraysiyo